I-plugin ye-WordPress SEO engcono kakhulu: Izibalo Zezinga | Martech Zone
I-plugin ye-WordPress SEO engcono kakhulu: Izibalo Zezinga
NgoLwesine, ngoMashi 24, 2022 NgoLwesine, ngoMashi 24, 2022 Douglas Karr
Cishe wonke amaklayenti we-WordPress futhi cishe yonke into esiyibukayo isebenzisa i-plugin ye-Yoast's WordPress SEO ukuphatha izinto ezisemqoka zokwenza izinjini zokusesha. Ngaphandle kwe-plugin yamahhala, i-Yoast inikeza nama-plugins akhethekile amaningi.
Bengihlala ngithola ukuthi i-plugin ye-Yoast's SEO ibe yinhle impela, kepha kunezikhisi ezimbalwa zezilwane engizitholile:
Iphaneli yokuphatha ye-Yoast SEO inokuhlangenwe nakho kwayo komsebenzisi okungafani nokuhlangenwe nakho komsebenzisi okuzenzakalelayo kwe-WordPress.
I-Yoast ihlale icindezela abantu ukuthi baguqulele kuma-plugins abo akhokhelwayo eyodwa noma amaningi. Sawubona… banikeze i-plugin enkulu yamahhala esetshenziswa kabanzi, ngakho-ke ngifuna ukubabona benza imali ngalowo mnikelo. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi kuyacindezela kakhulu ngombono wami.
The I-plugin ye-Yoast idinga izinsizakusebenza futhi inciphisa isiza sami phansi.
Siyazi - ngomakhalekhukhwini kanye nokusesha kubaluleke kakhulu - ukuthi ungalahlekelwa amakhulu noma izinkulungwane zezivakashi uma izikhathi zakho zokulayisha ikhasi zihamba kancane kunombangi wakho... ngakho isivinini bekuyinkinga ebucayi kimi.
I-plugin ye-Math WordPress SEO Plugin
Umngani wami, uLorraine Ball, ukhulume nge- I-plugin ye-Math SEO plugin futhi bekufanele ngiyivivinye ngokushesha. Isikhungo sikaLorraine, I-Roundpeg, yakha amasayithi we-WordPress amahle futhi athengekayo ngethani lamakhasimende. Bengikuthanda ngaso leso sikhathi ukuvivinya i-plugin ngiyilayishe kumasayithi amaningana ukubona ukuthi isebenza kahle kangakanani.
Iwizadi ongayiguqula isuka ku-Yoast SEO Plugin iye kuye Isikhundla Math ilula. Enye inzuzo ye-plugin ukuthi ungaba nayo ukuthi ingenise futhi ulawule ukuqondisa kabusha kwesayithi lakho. Ngiyafisa ukuthi banikeze amaqembu ukuze ahlele ukuqondisa kabusha kwakho, kodwa ukunciphisa inani lama-plugin kuwufanele ukulahlekelwa yileso sici.
Ngiyazisa kakhulu i-Rank Math's analyzer yokuqukethwe, okuhle kakhulu kuma-SEO novices ukuthi abhale futhi athuthukise okuqukethwe kwamagama asemqoka abangahle babhekiswe kuwo:
Izinzuzo Nezici zezibalo zezibalo
Kulula Ukulandela Isethaphu Wizard - Rank Math cishe iyazilungiselela. I-Rank Math ifaka ukufakwa kwezinyathelo ngezinyathelo kanye ne-wizard yokumisa esetha i-SEO ye-WordPress ngokuphelele. Lapho sekufakwa, i-Rank Math iqinisekisa izilungiselelo zesayithi lakho futhi incoma amasethingi afanele wokusebenza okuhle kakhulu. Isilekeleli ngesinyathelo bese sisetha i-SEO yesayithi lakho, amaphrofayili omphakathi, amaphrofayili we-webmaster, nezinye izilungiselelo ze-SEO.
Isixhumanisi Somsebenzisi Esihlanzekile Nesilula - Rank Math yakhelwe ukwethula imininingwane efanele kuwe ngesikhathi esifanele. I-interface-interface elula, kodwa enamandla igqamisa imininingwane ebalulekile mayelana nokuthunyelwe kwakho eceleni kweposi uqobo. Usebenzisa lolu lwazi, ungathuthukisa i-SEO yakho yeposi khona manjalo. I-Rank Math ibuye ibe nokuhlola kuqala amazwibela okuthuthukile. Ungahlola kuqala ukuthi okuthunyelwe kwakho kuzovela kanjani kuma-SERPs, ubuke kuqala amazwibela acebile, futhi ubuke kuqala ukuthi okuthunyelwe kwakho kuzobukeka kanjani lapho kwabelwana ngakho ezinkundleni zokuxhumana.
Uhlaka Modular - Sebenzisa okufunayo kuphela bese ukhubaza okusele. I-Rank Math yakhiwe kusetshenziswa uhlaka lwe-modular ukuze ukwazi ukulawula ngokuphelele iwebhusayithi yakho. Khubaza noma nika amandla amamojula noma kunini lapho uwadinga.
Ikhodi Yenzelwe Ijubane - Sibhale ikhodi kusukela ekuqaleni futhi siqinisekisa ukuthi wonke umugqa wekhodi unenhloso. Sibeke isipiliyoni seminyaka kulokhu ngakho i-plugin iyashesha ngangokunokwenzeka.
Idalwe ngabantu ngemuva kwe-MyThemeShop - Nge-Rank Math, uyazi ukuthi usezandleni ezinhle. Ukufaka amakhodi nokugcina iphothifoliyo yemikhiqizo ye-150 + WordPress kusifundise into eyodwa noma ezimbili ngokwenza ama-plugins angcono. Futhi, sithulule lonke ulwazi lwethu ekufakeni amakhodi e-Rank Math.
Ukuxhaswa Kwemboni-Okuhola - Sinakekela okwethu. Ngeke ushiywe uphezulu futhi womile lapho usebenzisa i-Rank Math. Sinikeza isikhathi esisheshayo sokuphenduka semibuzo yokusekela futhi silungise izimbungulu ngokushesha kunokuba ungazithola.
Ngemva kwesikhathi esingaphezu konyaka ngisebenzisa le plugin, ngithuthukele enguqulweni ekhokhelwayo futhi ngithuthele kuwo wonke amakhasimende ami. Ngiphinde ngabuyekeza uhlu lwami lwezincomo lwe Ama-plugins we-WordPress webhizinisi nge-Rank Math esikhundleni se Yoast futhi Ukulungiswa kabusha. Ngiyaqiniseka ukuthi uzobona izinzuzo.
Vakashela i-Rank Math
Tags: lobulungubest wordpress seo pluginukuhlaziywa kokuqukethweAmagama angukhiyeizinga lezibaloi-plugin ye-seoAmamephu amasayithiWordPressplugin wordpressi-wordpress seoxml amamephu esayithii-yoast